အာကာသထဲမှာ ချက်ချင်းကြီးအရပ်ရှည်လာလို့ စိတ်ပူနေတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးအာကာသယာဉ်မှူး - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
အာကာသထဲမှာ ချက်ချင်းကြီးအရပ်ရှည်လာလို့ စိတ်ပူနေတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးအာကာသယာဉ်မှူး
11 Jan 2018 . 3:37 PM
ဂျပန်လူမျိုးအာကာသယာဉ်မှုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Norishige Kanai ဟာ နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်း (International Space Station (ISS)) ကို ရောက်ရှိပြီးတည်းက ၃ ပတ်ကျော်အကြာမှာ သူ့အရပ်ဟာ ၉ စင်တီမီတာ (၃.၅ လက်မ) လောက်ရှည်လာတယ်လို့ သိရှိခဲ့ရပြီး ဒီအကြောင်းကိုလည်း သူဟာ Twitter မှာ ဂျပန်ဘာသာနဲ့ Tweet ခဲ့ပါတယ်။
“အာကာသထဲ ရောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာတွေ တိုင်းကြည့်တာ ၉ စင်တီမီတာလောက် အရပ်မြင့်လာတယ်ဗျာ၊ အံ့သြစရာပါပဲ။ အပင်တွေ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသလိုမျိုးပေါ့။ အထက်တန်းကျောင်းပြီးတည်းက ဒီလို ရုတ်ချည်း အရပ်ရှည်လာတာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး။ ခုဆို အိမ်ပြန်တဲ့အခါ အာကာသယာဉ် Soyuz က ခုံတွေနဲ့ ဆန့်ပါမလားလို့တောင် စိတ်ပူလာမိပါတယ်” လို့ Tweet ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ အရပ် ၉ စင်တီမီတာရှည်လာတာမဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာမြေမှာ ရှိစဉ်ကထက် ၂ စင်တီမီတာ (၀.၇ လက်မ) လောက်ပဲ ရှည်လာတာဖြစ်ပြီး သူရဲ့ မှားယွင်းတိုင်းတာမှုသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ Twitter မှာ ဒီလို သတင်းအမှားတွေကို တင်မိတဲ့အတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်နှစ်စင်တီမီတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတွေက အရပ်ရှည်ရခြင်းအကြောင်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ ဒီလို ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ အာကာသထဲမှာ ကမ္ဘာမြေဆွဲငင်အားကင်းမဲ့တာကြောင့် ကျောရိုးမှာ ရှိတဲ့ ကျောရိုးဆစ်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျယ်ပြန့်စေလို့ပါပဲ။
“ခုလို တိုင်းတာမှားတာ သိတဲ့နောက်မှာတော့ စိတ်သက်သာရာရသွားပါပြီ။ အိမ်ပြန်ရင် အာကာသယာဉ်နဲ့ ဆန့်ပြီလေ” လို့ Norishige Kanai က ပြောခဲ့တာပါ။
ဆိုယုဇ်(Soyuz) အာကာသယာဉ်ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခုံအမြင့်ရှိပြီး အရပ်အရမ်းရှည်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ အာကာသယာဉ်မှုးတွော အာကာသထဲမှာ ခုလို အရပ်ရှည်ကြီးထွားလာနိုင်ပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ Norishige Kanai အတွက်တော့ ဒီMission ဟာ ပထမဆုံးအာကာသ Mission မို့လို့ ဒီကိစ္စကို အထူးအဆန်းဖြစ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာကာသထဲမှာ ခကျြခငျြးကွီးအရပျရှညျလာလို့ စိတျပူနတေဲ့ ဂပြနျလူမြိုးအာကာသယာဉျမှူး
ဂပြနျလူမြိုးအာကာသယာဉျမှုးတဈယောကျဖွဈတဲ့ Norishige Kanai ဟာ နိုငျငံတကာ အာကာသစခနျး (International Space Station (ISS)) ကို ရောကျရှိပွီးတညျးက ၃ ပတျကြျောအကွာမှာ သူ့အရပျဟာ ၉ စငျတီမီတာ (၃.၅ လကျမ) လောကျရှညျလာတယျလို့ သိရှိခဲ့ရပွီး ဒီအကွောငျးကိုလညျး သူဟာ Twitter မှာ ဂပြနျဘာသာနဲ့ Tweet ခဲ့ပါတယျ။
“အာကာသထဲ ရောကျပွီး ခန်ဓာကိုယျအတိုငျးအတာတှေ တိုငျးကွညျ့တာ ၉ စငျတီမီတာလောကျ အရပျမွငျ့လာတယျဗြာ၊ အံ့သွစရာပါပဲ။ အပငျတှေ တဖွညျးဖွညျးကွီးထှားလာသလိုမြိုးပေါ့။ အထကျတနျးကြောငျးပွီးတညျးက ဒီလို ရုတျခညျြး အရပျရှညျလာတာမြိုး မရှိတော့ပါဘူး။ ခုဆို အိမျပွနျတဲ့အခါ အာကာသယာဉျ Soyuz က ခုံတှနေဲ့ ဆနျ့ပါမလားလို့တောငျ စိတျပူလာမိပါတယျ” လို့ Tweet ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ သူဟာ အရပျ ၉ စငျတီမီတာရှညျလာတာမဟုတျဘဲ ကမ်ဘာမွမှော ရှိစဉျကထကျ ၂ စငျတီမီတာ (ဝ.၇ လကျမ) လောကျပဲ ရှညျလာတာဖွဈပွီး သူရဲ့ မှားယှငျးတိုငျးတာမှုသာ ဖွဈတယျလို့ ဝနျခံခဲ့ပါတယျ။ Twitter မှာ ဒီလို သတငျးအမှားတှကေို တငျမိတဲ့အတှကျလညျး တောငျးပနျပါတယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဘယျနှဈစငျတီမီတာပဲ ဖွဈဖွဈ လူတှကေ အရပျရှညျရခွငျးအကွောငျးကိုပဲ စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။ ဒီလို ဘာကွောငျ့ဖွဈရလဲဆိုတော့ အာကာသထဲမှာ ကမ်ဘာမွဆှေဲငငျအားကငျးမဲ့တာကွောငျ့ ကြောရိုးမှာ ရှိတဲ့ ကြောရိုးဆဈတှကေို လှတျလှတျလပျလပျကယျြပွနျ့စလေို့ပါပဲ။
“ခုလို တိုငျးတာမှားတာ သိတဲ့နောကျမှာတော့ စိတျသကျသာရာရသှားပါပွီ။ အိမျပွနျရငျ အာကာသယာဉျနဲ့ ဆနျ့ပွီလေ” လို့ Norishige Kanai က ပွောခဲ့တာပါ။
ဆိုယုဇျ(Soyuz) အာကာသယာဉျဟာ သတျမှတျထားတဲ့ ခုံအမွငျ့ရှိပွီး အရပျအရမျးရှညျတဲ့သူအတှကျဆိုရငျတော့ ပွဿနာရှိနိုငျပါတယျ။ အာကာသယာဉျမှုးတှော အာကာသထဲမှာ ခုလို အရပျရှညျကွီးထှားလာနိုငျပွီး ကမ်ဘာမွပေျေါပွနျရောကျတဲ့အခါကရြငျတော့ ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားတတျပါတယျ။ Norishige Kanai အတှကျတော့ ဒီMission ဟာ ပထမဆုံးအာကာသ Mission မို့လို့ ဒီကိစ်စကို အထူးအဆနျးဖွဈနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Galaxy S10 မှာထည့်သွင်းလာမယ့် သုံးဖက်မြင်နည်းပညာဆိုတာ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ?
ကင်ဆာကုထုံးမှာ အသုံးတွင်ကျယ်လာတဲ့ $39 သန်းတန် ကင်းမြီးကောက်အဆိပ်
Snapdragon 850 အသုံးပြုထားတဲ့ Galaxy Book2ကို Samsung မိတ်ဆက်
LG Display ရဲ့ Rollable OLED နဲ့ Foldable Tablet ထုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ Lenovo
Intel နဲ့ ARM ကိုခဝါချပြီး ကိုယ်ပိုင် Processor နဲ့ MacBook ထုတ်ဖို့ Apple ပြင်နေပြီ